स्वास्थ्य – Page 67 – Medianp
कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति, रजिस्ट्रार र निर्देशकलाई सिडओ कार्यालय लगियो, कर्णालीका मुख्यमन्त्री शाही केसी भेट्न पुगे
Media NPप्रकाशित मिति: बिहिबार, साउन ०३, २०७५११:३२0
काठमाडौं, ३ साउन । जुम्लामा अनसनरत डा.गोविन्द केसीलाई सरकारले काठमाडौं ल्याउने तयारीमा अवरोध भएको छ । स्थानीय जनता, नागरिक समाज, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका डाक्टर र विद्यार्थी सरकारी प्रयासमा अवरोध बनेका हुन् । नेपाल प्रहरी र
सरकारले संसदमा पेश गर्न लागेको चिकित्सा शिक्षा विधेयकको (पूर्ण पाठ)
Media NPप्रकाशित मिति: बिहिबार, साउन ०३, २०७५१०:५९0
काठमाडौँ, ३ साउन । सरकारले आज चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसदमा पेश गर्ने तयारी गरेको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसको चेतावनीको बाबजुद पनि सरकारले विधेयक संसदमा पेश गर्न लागेको हो । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको अघिल्लो
यी हुन्, माथेमा प्रतिवेदनले सुझाएका ८ खास बुँदाहरु
Media NPप्रकाशित मिति: बिहिबार, साउन ०३, २०७५१०:४६0
चिकित्सा शिक्षा सुधारको मागलाई केन्द्रमा राखेर डाक्टर गोविन्द केसी पन्ध्रौँ पटक अनशनमा बसिरहँदा अहिले समेत उनी पक्षधर र प्रमुख प्रतिपक्षी दलले माथेमा प्रतिवेदनलाई उनको माग सम्बोधनको आधार बनाउन आग्रह गरेका छन्। चिकित्सा शिक्षामा सरकारको अभिभावकीय जिम्मेवारी
गोरो हुने चाहना छ ? यो पढ्नुहोस तर अत्यधीक प्रयोगले हुन सक्छ प्रजनन समस्या
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: बिहिबार, साउन ०३, २०७५०८:२८0
धेरै समय अगाडी देखी नै तरकारीहरुका एकदमै मन पराइएको तरकारी मध्ये मटर पनि एक हो । हरेक तरकारीहरु पौष्टीक हुन्छन् तर अन्य तरकारीको तुलनामा मटरको माग चिसोको समयमा अत्यधीक हुने गर्दछ । हरीयो मटर मा
हड्डी बलियो बनाउन र महिलामा हुने स्तन क्यान्सर रोक्न प्रयोग गर्नुहोस टमाटर
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: बुधबार, साउन ०२, २०७५१८:३०0
काठमाडौँ । टमाटर तरकारी हो । टमाटर हाम्रो भान्सामा अनिवार्य समाबेश हुन्छ । टमाटर जति रातो र पाकेको हुन्छ, त्यति नै मिठो हुन्छ । यो सबैको लागि अति फाइदाजनक हुन्छ । यसले विभिन्न रोगबाट बचाउन
चिकित्सक संघले भोलि देशभरको स्वास्थ्य संस्थामा आकस्मिक बाहेकका सबै सेवा बन्द गर्ने, सुनुवाई नभए आकस्मिक सेवा पनि रोक्ने चेतावनी
Media NPप्रकाशित मिति: बुधबार, साउन ०२, २०७५१६:१५0
काठमाडौं २, साउन । नेपाल चिकित्सक संघले भोलि बिहीबार देशभरका स्वास्थ्य संस्थामा आकस्मिक बाहेकका सबै सेवा बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ । आमरण अनसनरत डा.गोबिन्द केसीको मागका सम्बन्धमा सरकार गम्भीर नभएको ठहर गर्दै संघले सरकारलाई दबाब
कुन ब्लड ग्रुप भएका व्यक्तिले कुन चिया पिउने ?
मिडिया एनपी एनपीप्रकाशित मिति: बुधबार, साउन ०२, २०७५१४:५१0
काठमाडौँ,२ साउन । हामीले खाने पिउने सबै कुराहरुले स्वास्थ्यमा सकारात्मक र नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको हुन्छ । तपाई हामे स्वास्थ्यमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण भूमिका बल्ड ग्रुपको रहेको हुन्छ । स्वास्थ क्षेत्रमा कुन ब्लड गु्रपको व्यक्तिले कस्तो आहार खान
मनमोहन मेडिकल कलेज मापदण्ड पुरा भएको संस्थाः उपाध्यक्ष डा.वंशीधर मिश्र
Media NPप्रकाशित मिति: बुधबार, साउन ०२, २०७५१२:२७0
काठमाडौँ, २ साउन । प्रस्तावित मनमोहन मेमोरियल मेडिकल कलेज एण्ड टिचिङ हस्पिटलले आफ्नो संस्था पूर्व प्रधानमन्त्री स्व.मनमोहन अधिकारीको योगदानलाई चिरस्थायी गर्ने उद्देश्यले स्थापना गर्न खोजिएको सेवामूलक संस्था भएको जनाएको छ । मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अस्पतालका
किन गन्हाउँछ मान्छेको जीउ ? समाधानका उपाय यस्ता छन् ।
Media NPप्रकाशित मिति: बुधबार, साउन ०२, २०७५११:३१0
काठमाडौँ, २ साउन । गर्मीमा पसिना आउँछ र पसिना आएपछि जीउ गन्हाउँछ । यो स्वभाविकै हो । संयुक्त अधिराज्यस्थित योर्क र अक्स्फोर्ड विश्वविद्यालयका वैज्ञानिकहरूले मानिसको शरीरमा कसरी गन्ध बन्छ भन्ने पत्ता लगाएका छन् । उनीहरूका अनुसार
उचाई र उमेर अनुसार तपाईंको तौल कति हुनु पर्छ ? जान्नुहोस्
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: मङ्गलबार, साउन ०१, २०७५१९:२५0
एजेन्सी – शरीरलाई आवश्यक भएअनुसार तपाईंको तौल हुन जरुरी छ । सहि तौल नभएमा विभिन्न रोगहरु जस्तै: मधुमेह , मुटुसम्बन्धि रोग , उच्च रक्तचाप आदि हुने सम्भावना रहन्छ । तौलको कमी हुनु पनि स्वास्थ्यको लागि निकै
Previous 1 … 66 67 68 … 129 Next